चिसोमा हात–खुट्टाको जोर्नी दुख्छ ? हेलचेक्रयाइँ नगरौं | सुदुरपश्चिम खबर
चिसोमा हात–खुट्टाको जोर्नी दुख्छ ? हेलचेक्रयाइँ नगरौं
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ 42
चिसो मौसम शुरु भइसकेको छ । यसबेला अनेकथरी शारीरिक समस्याले मानिसहरुलाई सताउने गर्दछ । तीमध्ये एउटा साझा समस्या हो, आर्थराइटिस वा गठिया रोग ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीका चालक हुन् वा बिहान–बेलुका घरबाहिरको काममा खटिने विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा हातखुट्टाको जोर्नी दुख्ने र सुन्निने समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेको हाडजोर्नी विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
जाडोमा बाथ रोगबाट पीडितहरुले तातोपानीले नुहाउनु उपयोगी हुने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । तातोपानीमा पौडी वा स्टिम बाथ गर्नु शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ । माछाको तेलमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड हुन्छ । हड्डीको समस्या भएकाहरूको लागि यो उपयोगी मानिन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार